Ajax oo ku bar baratay Real Marid kana cirib tirtay Champions League iyo Tottenhamna oo tiigsaty wareega xiga +Sawiro – Gool FM
Bashiir March 5, 2019
(Yurub) 6 March 2019 kooxda Ajax oo ku bar baraty kooxda Real Madrid kana cirib tirtay tartanka Champions League kaddib markii ay ku xasuuqeen 4-1 balse wadarta goolasha ee labada kulan ayaa ah ( 5-3).
Qeebtii koowaad ee kulankaba kooxda Ajax ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan iyada oona ku bar baratay kooxda Madriid oo ku ciyaareysa garoonkeeda .
Waxa ay la yimaadeen labo gool qebtii koowaad ee ciyaartaba , Taageerayaasha Madrid waxaa ka soo haray dhaban qabsi iyo jahwareer .
Daqiiqadii 7-aad ee ciyaartaba kooxda martida aheyd ayaa ka timid goolka koobaad waxaana u dhaliyey Ziyech waxaana caawinta gookaas lahaa xidigii hore ee Southampton ee Tadic.
Markale laacibka lugta guran ee Tadic ayaa abuuray goolka labaad waxaana shabaqa gaarsiiyey laacibka lagu magacaabo Neres daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta .
Ajax ayaa sameesay fursad kale oo sedexaad oo gool loo filan karay balse uma suura galin , ugu dambeena waxaa soo dhamaaday qeebtii koowaad ee ciyaarta oo lagu kala maray 2-0 hadii sida kale loo dhigana 3-2 wadarta labada kulan .
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta kooxda Madrid ayaa sameesay dhowr isku dayo biliwgii horee ee qeebtii dambe ee ciyaarta balse waxaa markale lowga naxsaday gool sedexaad waxaana ka dhaliyey Tadic oo ahaa shumaca garoonka .
Daqiiqadii 70-aad ee ciyaarta Madrid ayaa la timid gool waxaana u dhaliyey Asensio balse daqiiqad oo qura ayaa ka soo wareegatay markii laga dhaliyey goolkii afaraad ee ciyaarta waxaana kubad laad xur ah shabaqa dhex dhigay Schoene oo durba ciyaarta laga saaray .
Ugu dambeen dheesha ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4-1 , Real ayaana ku fashilantay in ay gaaraan wareega xiga markoodii ugu horeyey tan iyo 2010 wixii waqtigaa ka dambeyey waxa ay sideed sano oo xiriir ah ay gaarayeen wareega sideed dhamaadka.
Dhinaca kale kooxda Tottenham ayaa u soo gudubtay wareega xiga ee sideed dhamaadka kaddib markii ay ka adkaadeen kooxda Dortmund kulankii lugtii labaad oo ku dhamaaday 1-0 balse wadarta labada kulan ayaa ah (4-0 )
Harry Kane ayaa dhaliyey goolka ay kaga adkaadeen daqiiqadii 49-aad ee qeebtii dambe ee ciyaarta .
Kooxda reer Englad ayaana u gudubtay wareega xiga ee sideed dhamaadka markii ugu dambeysay oo ay heerkan soo gaaraan waxa ay aheyd sanadkii 2010-kii.
HORDHAC: Paris Saint-Germain VS Manchester United? xaalka United oo ah Allow sahal iyo PSG oo cidiyaha ku dagaalami doonta si ay heerka xiga u garaan .